Iwo manomwe echinyakare echiChinese zviyeuchidzo: zvipo mazano | Kufamba Nhau
Iwo chaiwo zviyeuchidzo zveChina
Mariela Carril | | China, General, Asia kufamba
China Iyo nyika yandakada kwenguva yakareba. Ndechinyakare, chakakosha uye muchikamu chino cheAsia ndipo panowanikwa tsika nemagariro nekuti simba rayo rave nesimba. Nhasi China igoridhe rinozivikanwa, asi ini ndinotenda kuti haina kumira kuva zvakadaro.
Iyo yakasarudzika, yakasarudzika nyika, zvakasikwa pachezvayo. Zviri yakakura uye ine tsika dzakasiyana uye kupfuura kwemazana emakore kwakaburitsa imwe yetsika dzakapfuma kwazvo. Chinhu chakanaka ndechekuti sezviyeuchidzo tinogona kutora kumba chikamu chetsika yemadzitateguru, saka pano ndinokusiya runyorwa rweakanakisa zviyeuchidzo kubva kuChina, iwo asingakwanise kushaiwa musutukezi yako.
2 Chinese silika
3 China porcelain
4 Chinese kites
5 Chinese mwenje
7 Chinese zvigadzirwa zvevanhu
Jade ari yakaoma mineral iyo inogona kuve yakasvibira kana chena, mubatanidzwa wemagnesium uye calcium silicate. MaChinese anga achishanda pairi kwezviuru zvemakore uye mutsika yavo ndizvo zviri goridhe mutsika yeInca, semuenzaniso.
Jade zvine hukama nemweya, hunhu, hunhu, hunhu uye chiremerera uye ndosaka zvaive zvakajairika mumariro kana tsika dzechitendero. Nekufamba kwenguva yakatanga kuve nekumwe kushandiswa uye zvinhu zvekushongedza uye kushandiswa kwemazuva ese uye kwega kwakagadzirwa nejade kwakaonekwa: mabhokisi, mizinga, mizinga, zvishongo.
Mukati mehunyanzvi hwejade pane mamwe mapatani: bamboo anomiririra maitiro emutsa, fan fan, deer raishandiswa nevakuru-vakuru, dhadha rinomiririra rudo uye mapichisi anomiririra hupenyu hurefu, semuenzaniso. Ndarama nematombo anokosha anogona kunge achikosha, asi kune maChinese, jade rine mweya.
Paunenge uchitenga chero chinhu chejade iwe unofanirwa funga kubwinya kwedombo, kubwinya, ruvara, uye kuumbika kwacho. Kana iwe ukaona mabhuru emhepo haisi yejedhi chaiyo uye kana paine kutsemuka zvakakosha zvishoma. Uye hongu, jade rinofanira kutarisirwa: hapana mapundu, hapana guruva, hapana zvinonhuwira nemakemikari nekuti zvinokanganisa kupenya uye zviri muzuva kwenguva refu.
Silika chave chinhu chakakosha kwemazana emakore. Honye inoburitsa silika kusvikira yafa, inofungidzirwa mamita chiuru mumazuva makumi maviri nemasere chete. Ndokusaka silika yepakutanga ichidhura. MaChinese anotanga kushanda sirika panguva yeHan Dynasty uye iyo yakakurumbira Silk Road yakatanga kubva kumakore iwayo, nzira yekutengeserana yakatanga kuChina yakasvika kuEurope.
Kana uchitenga silika yeChinese, tsvaga yakapfava kuti iwe unogona. Ziso rakarovedzwa rinosiyanisa sirika chaiyo kubva kune yekunyepedzera asi zvine hungwaru iwe unofanirwa kungwarira kuti tambo dzakatetepa uye dzakareba, dzekumira zvine mwero, dzine kupenya asi kwete zvakanyanya.
Unogona kutenga madhirezi, hengechepfu, bhokisis micheka pasilika, shangu.
Imwe yehunyanzvi hwekutanga hweChinese kusvika kuEurope kuburikidza neSirk Road yaive chaiyo porcelain yayo. Chinese porcelain akaberekerwa kune vakapfuma kirasi asi nekukurumidza akapararira kumakirasi epasi nekuda kwayo simba nekusimba.
Hari dzemarudzi ese, tii seti, mabhokisi ekushandisa kwakasiyana, zviridzwa uye zvimwe zvakawanda zvakagadzirwa uye zvakagadzirwa nevhu. Zvichida nguva yakakurumbira yeunyanzvi iyi yakararama munguva dzeDunhu reYuan, pakati pezana ramakore re XIII ne XIV, yakasarudzika yebhuruu uye chena porcelain. Asi imwe neimwe yedzinza yakaunza maitiro ayo kune aya hunyanzvi.
Unogona kutenga 100% Chinese porcelain mune chero misika kana nzvimbo dzekutengesa uye mabhokisi madiki, semuenzaniso, ari zviyeuchidzo zvikuru zvevakadzi.
Kites, kites, sezvaunoda kuvaudza, kuChina vanozivikanwa sa zhiyuan y ndeimwe yemabasa ekare kubvira pakuonekwa kwavo kwakadzokera muzana ramakore rechisere BC.Kites dzaive nekushandisa kwakasiyana siyana, zvemauto zvakare, asi vakave vakakurumbira pakati pemakirasi ese enharaunda.
Iwo ekutanga maChinese makiti ari yakagadzirwa ne bamboo uye bepa uye dzinogona kuumbwa sedhiragoni, shavishavi kana chipembenene. Iwo echimanjemanje ane mamwe maumbirwo uye akagadzirwa pamwe nezvinhu izvi kana nemapurasitiki uye ekugadzira faibha asi iwo akangofanana.
Ndiani asati asvika kuresitorendi yeChina izere nemwenje yemapepa? Dzakatanga kare kare, pakati pezana ramakore rekutanga nerechitatu, uye aingova marambi munguva idzodzo.
Chiedza cheChina inogona kugadzirwa bepa, yemishenjere, huni, sirika, bepa. Ivo vaive uye vachiri nekushandisa zvechitendero asi nekufamba kwenguva vanhu vaishandisa kuratidza nguva dzakasiyana, pamwe nekuvhenekera.
Nekuvandudzwa kwemamwe matekinoroji emwenje emwenje, mwenje dzeChinese dzakangova dzekushongedza. Hakuchina chiyeuchidzo chekare. Hongu zvirokwazvo, kune matochi emhando dzakasiyana, yakatenderera semabhaluni, akareba, akaumbwa sedhiragoni. Dzinotengeswa kwese kwese.
Iyo cloisonne ndeyekare huchi hwekugadzira glazing inoshandiswa kushongedza zvinhu zvesimbi. Iyo yakatanga muBeijing muzana ramakore regumi nematatu uye zvinhu zvebronze zvinoshandiswa. Iwo matekiniki akavandudzwa nekufamba kwenguva uye yakave iri yakachena kwazvo hunyanzvi
Iyi nzira ndeye yakaoma uye yakaomesesa: Sanganisa porcelain, ndarira, kupenda uye chivezwa invoice. Nhasi vatengeswa midziyo, vhasi, matsime uye zvishongo dzakasiyana siyana dzecloisonne neChina mutengesi mukuru.
Nzvimbo mbiri dzakanaka dzekutenga cloisonne ndiLiulichang Street neBeijing Wangfujing Dajie Shopping Street..
Chinese zvigadzirwa zvevanhu
MaChinese agara achigadzira matoyi uye kune hwakawanda hunyanzvi hwakabatanidzwa mukugadzirwa kwavo. Idzo ndidzo zviyeuchidzo zvakanaka nekuti mukuwedzera zvinowanzova zvinhu zvakachipa. Iko kune dombo, matanda, porcelain, wakisi, zvedongo.
Kune zvinhu zvinogadzirwa nevakadzi netsika nemachira, izvo zvinobva zvashongedza nemabhururu, maruva kana mhuka, izvo zvinowanzo kupihwa vana. Pane manhamba ane hukama neChina opera kana chinamato cheChinese uye ngano, pane zvekare zvekare matsvuku mapfundo, all mabhokisi emimhanzi, the chidzoyi uye nhasi, sematoyi akakomberedzwa emhando dzose uye mavara.
Kunze kwezviyeuchidzo izvi zvinobva kuChina kune mamwe akafanana mafeni, zvitambi zvechinyakare, mishonga yechiChinese kana zviyeuchidzo kubva kuhutongi hwechiKomonisiti. Chokwadi ndechekuti China musika mukuru saka ndinokurudzira kuti iwe ugadzirire kutakura imwe sutukesi kana bhegi nezvose zvaunotenga. Yakachipa, unogona kubiridzira, uye inzvimbo yeavo vanofarira kutenga yezviyeuchidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » China » Iwo chaiwo zviyeuchidzo zveChina
Kushanda mungarava yechikepe: isarudzo yakanaka here?
Zviitiko zvishanu muJapan zvausingafanire kupotsa